जाम सपिङ्ग गर्न
Friday, 15 Mar, 2019 12:25 PM
केटा एउटा केटीसंग कुरा गर्दै
केटा: म सँग घुम्न जान्छौँ ?
केटी: कता लान्छौँ हौ ?
केटा: तिमी जता भन्छौँ त्यहीँ जाम ।
केटी: ओके तेसो भए सपिङ गर्न जाम ।
केटा: कसम दिदी मैले त मजाक पो गरेको त ।